အကြှနျုပျ၏ Geofumadas - Geofumadas
Geofumadas - ဒီဒီဂျစ်တယ်အခိုက်အတန့်တွေကို
Going Digital သည်သင်၏အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုမည်သို့ဖြေရှင်းနိုင်သနည်းဆက်သွယ်ထားသောပတ် ၀ န်းကျင်သည်၎င်းအကြောင်းကိုမပြောရုံသာမကသင်၏ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများ၌လည်းလမ်းပေါ်သို့ဆင်းလာသည်။ အင်ဂျင်နီယာ၊ ဗိသုကာနှင့်ဆောက်လုပ်ရေး (AEC) ပညာရှင်များအားလုံးသည်မာဂျင်တင်းကျပ်မှုနှင့်တာဝန်ယူမှုကိုလျှော့ချရန်နည်းလမ်းသစ်များရှာဖွေရန်အာရုံစိုက်နေကြသည်။
Bentley Systems က information model ရဲ့
ကျနော်တို့တကယ် 3D Spatial ပတ်သတ်ပြီးတစ်ခု "ဆန်းသစ်" လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်စွဲလန်းနှစ်သက်ပါသလား?
"ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ခြင်းသည်အခြားရှုထောင့်တစ်ခုကိုဖွင့်ရန်အလားအလာရှိသည်" ဟုဆောင်းပါးအဆုံး Muthukumar Kumar က 3D ပတ် ၀ န်းကျင်များဖန်တီးမှု၊ ၎င်း၏အသုံး ၀ င်မှု၊ အရေးပါမှုနှင့်အနာဂတ်ကိုအထူးရည်ညွှန်းသည်။ အနာဂတ်အကြောင်းပြောရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုရိုးရှင်းသော charlatanism မှဝေးရာသို့ပို့ဆောင်သောဤစကားလုံးဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။
geospatial - GIS, တီထွင်မှု, အကြှနျုပျ၏ egeomates
လုပ်ငန်းခွင် GIS oriented ။ ထူးအိမ်သင်နှိုင်းယှဉ်အဖြစ်မှန်
GIS အလုပ်ရှင်များအမှန်တကယ်မည်သည့်အရာများရှာဖွေနေသည်ကိုစတင်တွေးတောခြင်းဖြင့်အစပြုသည့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ရှုပြီးနောက်ဤနိဂုံးချုပ်များသည်သင်၏တိုင်းပြည်များနှင့်တူညီခြင်းသို့မဟုတ်ကွဲပြားနိုင်သည် (ဖြစ်နိုင်သည်နှင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားခြင်း) ဖြစ်နိုင်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏နေရင်းတိုင်းပြည်များသို့မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိကောက်ချက်ချနိုင်သည်ကိုငါသိချင်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှုတွင်အသုံးပြုသော 'ကုန်ကြမ်း' သည်ကမ်းလှမ်းမှုအားလုံးဖြစ်သည်။
geospatial - GIS, အကြှနျုပျ၏ egeomates
တိကျသောရည်ရွယ်ချက် - မှီခိုသည့် Cadastre - လမ်းကြောင်း၊
၂၀၀၉ ခုနှစ်ကမြူနီစီပယ်၏ Cadastre ၏ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုကိုစနစ်တကျတွက်ချက်မှုကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့သည်။ ၎င်းသည်သဘာဝကျသောယုတ္တိဗေဒအရ Cadastre ကိုအခွန်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အဘယ်ကြောင့်မွေးစားရခြင်း၏အကြောင်းပြချက်များနှင့်အချက်အလက်၊ နည်းပညာများကိုဆက်စပ်သောပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ၂၀၁၄ အတွက် ...
cadastre, အသားပေး, အကြှနျုပျ၏ egeomates, topografia
အတွေးအခေါ်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအခြေအနေများနှင့်လုံးဝမတူကွဲပြားသောလူများစုရှိရာနေရာတစ်ခုတည်း၌ထိုင်ခြင်းဟူသည့်အယူအဆကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သော်လည်းစပိန်စကားပြောသူများ၏မူကွဲတွင်ပေါင်းသင်း။ ပထဝီ ၀ န်းကျင်အခြေအနေတွင်ဖြစ်ပျက်သောအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အမင်းစိတ်အားထက်သန်ကြသည်။ ဤသည်မှာ "I National Geobloggers Meeting" ဖြစ်ပြီး ...
အသားပေး, အကြှနျုပျ၏ egeomates
အနာဂတ်ကာလ၌မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုမည်သို့ရှိမည်နည်း။ - Cadastre 2034 ၏ရူပါရုံကို
၂၀၃၄ ခုနှစ်တွင်မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုကိုမည်သို့ပုံဖော်မည်ဆိုပါကလွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀ အတွင်းအပြောင်းအလဲများမည်မျှရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ပါကမလွယ်ကူလှပါ။ သို့သော်ဤလေ့ကျင့်ခန်းသည် Cadastre ၂၀၁၄ မတိုင်မီအနှစ် ၂၀ တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောဒုတိယကြိုးပမ်းမှုဖြစ်သည်။
cadastre, အကြှနျုပျ၏ egeomates
အိမ်ခြံမြေစီမံခန့်ခွဲမှု SINAP အမျိုးသားစနစ်
အမျိုးသားအိမ်ခြံမြေစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (SINAP) သည်နိုင်ငံ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရင်းအမြစ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုပေါင်းစပ်ထားသောနည်းပညာဆိုင်ရာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မတူကွဲပြားသောအများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကပါဝင်သူများနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီသည်ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်သောအရောင်းအ ၀ ယ်အားလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်သည်။ စျေးကွက်၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ပြောင်းလဲမှုအတွက်လိုအပ်သောပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု ...
အသားပေး, geospatial - GIS, အကြှနျုပျ၏ egeomates, မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှု
ငါပါ ၀ င်သောစီမံကိန်းများစွာတွင် LADM ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောရှုပ်ထွေးမှုများသည်၎င်းကို ISO စံအဖြစ်နားလည်ရန်မဟုတ်ဘဲ ၄ င်း၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစက်ယန္တရားမြင်ကွင်းမှခွဲခြားထားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိကြောင်းမျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့ရပြီ။ တနည်းအားဖြင့်ဘယ်လိုအကောင်အထည်ဖော်ရမလဲ။ ဒါဟာ LADM မ ... ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ရမည်
cadastre, အသားပေး, အကြှနျုပျ၏ egeomates, မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှု
LADM - ကိုလံဘီယာသည်မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုနယ်ပယ်၏ထူးခြားသောစံပြပုံစံဖြစ်သည်
Golgi Alvarez နှင့် Kaspar Eggenberger တို့၏တင်ပြချက်အကျဉ်းချုပ်ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်ဇွန်လတွင်Bogotáရှိ Andean Geomatics Congress တွင်တင်ပြခဲ့သည်။ ဘက်စုံသုံးကပ်ဘေးကြီးအတွက်လိုအပ်ချက် National Development Plan 2016 - 2014 နှင့် National Land Agency ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း။ ANT၊ မြေကွက်၏မျှော်မှန်းချက် ...
cadastre, အသားပေး, အကြှနျုပျ၏ egeomates
Blockchain နှင့် Bitcoin မြေယာစီမံခန့်ခွဲရန်လျှောက်ထား
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာကွန်ဂရက်မှာမဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာကကျွန်တော့်ကိုချဉ်းကပ်ခဲ့တယ်၊ သူကဒီနည်းပညာအမျိုးအစားကိုအိမ်ခြံမြေမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Cadastre နဲ့အိမ်ခြံမြေစီမံခန့်ခွဲမှုနယ်ပယ်မှာအသုံးချတာကိုမေးခဲ့တယ်။ စကားစမြည်ဝိုင်းကစိတ်ဝင်စားဖို့ထက်ပိုပါတယ်၊ သူစဉ်းစားပြီးသူပြောတာကိုကျွန်တော်တော်တော်အံ့သြသွားတယ်။
cadastre, အသားပေး, တီထွင်မှု, အကြှနျုပျ၏ egeomates
BIM - လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀ ကကျွန်ုပ်အိပ်မက်မက်ခဲ့သောကမ္ဘာ
အနှစ် ၂၀ အကြာတွင် BIM ကို၎င်းအချိန်တွင်ကိုယ်စားပြုသောဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အဖြစ်သာကျွန်တော်ဆက်စပ်နိုင်သည်၊ ပုံဆွဲဘုတ်နှင့် CAD ဖိုင်များအတွက်စက္ကူသဲလွန်စကိုချန်ထားသည်။ ၎င်းသည်ပုံကြမ်းရေးဆွဲသူအနုပညာရှင်တစ် ဦး အဖြစ်လည်းကောင်း၊ မှတ်စုစာအုပ်ဂဏန်းတွက်စက် + ဂဏန်းတွက်စက် + Lotus 20. ဖြစ်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်အထင်ကြီးစရာကောင်းသောဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်။
အသားပေး, အင်ဂျင်နီယာ, Microstation-Bentley, အကြှနျုပျ၏ egeomates
ရိုးရာမြေမျက်နှာသွင်ပြင် vrs ။ လစ်ဒါ။ တိကျမှု၊ အချိန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်များ။
LiDAR နှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းသည်သမားရိုးကျစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းထက်ပိုမိုတိကျနိုင်ပါသလား။ သင်အချိန်ကိုလျှော့ချပါကမည်သည့်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်သင်ကုန်ကျမည်ကိုသင်မည်မျှလျှော့ချမည်နည်း။ အချိန်ကာလများပြောင်းလဲသွားသည်။ ငါ့အတွက်လယ်ပြင်လုပ်ခဲ့တဲ့မြေတိုင်းစစ်ဆေးသူ Felipe ဟာ ၂၅ မျက်နှာရှိတဲ့အပိုင်းတွေပါတဲ့မှတ်စုစာအုပ်နဲ့လာလာတဲ့အခါငါမှတ်မိသေးတယ်။
အသားပေး, အင်ဂျင်နီယာ, အကြှနျုပျ၏ egeomates, topografia
မြေပုံရေးဆွဲခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သောဆက်သွယ်ရေးကိုထောက်ပံ့သောကွဲပြားခြားနားသောသီအိုရီများကိုကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရှုသောအခါ၊ ပထဝီဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များကိုကိုယ်စားပြုရန်သိပ္ပံပညာတစ်ခုအနေနှင့်၎င်းအချက်အလက်များကိုလိုအပ်သောဗေဒကိုပေးသည့်အနုပညာတစ်ခုအနေဖြင့်ဖတ်ရှုသောအခါကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်နေထိုင်သည့်အခိုက်အတန့်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ များတွင်လုပ်ရပ်များစွာပါ ၀ င်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သဘောပေါက်သည်။ georeference ကို action တစ်ခုအနေနဲ့သုံးတဲ့နေရာမှာ။
geospatial - GIS, ဂျီပီအက်စ် / ပစ္စည်း, အကြှနျုပျ၏ egeomates
စာမျက်နှာ 1 စာမျက်နှာ2စာမျက်နှာ3... စာမျက်နှာ 8 နောက်စာမျက်နှာ